China Palmitoyl Tetrapeptide-7 mveliso kunye nabenzi | JYMed
Igama Product: Palmitoyl tetrapeptide-7
Ifomula Ezinto: C34H62N8O7
Ubunzima Ezinto: 694,919 g / Mol
Inkangeleko: powder White
Ezezicelo: Uncedo olunokubakho ukudumba eluswini, ukugcina isikhumba okunempilo
Iphakheji: ibhotile 10/20 / 50g / iHDPE / PP, okanye zifakwe ngokwemfuneko loMthengi
Palmitoyl tetrapeptide-7 na uhlobo zokwenziwa peptide compound okuhlanganisa neentsontelo eziliqela asidi acid ukunciphisa ulusu nangokurhala, umonakalo isikhumba iqhotyoshelweyo. Le compound peptide kwakhona kukholelwa ukuba ukuvuselela nokuhlaziya ngokutsa imicu collagen kwi dermis ngokwenza njengoko uhlobo isithunywa yeselula. Palmitoyl tetrapeptide-7 nayo wacinga ukunyusa ubungakanani hyaluronic acid eluswini, nto leyo inokunceda nsinya lesikhumba etsala ukufuma ku sangaphandle. Nangona imichiza uthathwa ukuba uphephe zisetyenziswe care eluswini, ubuchule bale nto ukuba ndidilize ulusu kombala kungakhokelela kwimiba ulusu umbala. Ukuba uceba ukongeza iimveliso kunye palmitoyl tetrapeptide-7 ukuya kwimveliso yakho zolusu, kukwenza ngokuthe ngcembe, yaye ngokukhethekayo phantsi ukunyamekela wesikhumba yakho.
Palmitoyl tetrapeptide-7 ingqalelo ukuba into bhetele ukusetyenziswa kwiimveliso izithambiso ngenxa ukukwazi layo ukungena ulusu, bamnikele nezinye izithako nokuguga anti nzulu kwizihlunu esikhumbeni. Umgangatho ukunyibilika ioli yenza isigqibo ifanelekileyo kudibaniso nge iikhompawundi ezisetyenziswayo eziqhelekilyo kwiimveliso dermatological ngakumbi iimveliso ukuguga anti, ekubeni kwimixube kunokwenzeka ngakumbi ukuba ahlale homogenous. Ukuze ufumane ingxelo epheleleyo ezingqonge imiba ezinobungozi, iziphumo ebezingalindelekanga kunokwenzeka ngenxa ukusetyenziswa elide kunye nezinye izinto, le tetrapeptide-7 palmitoyl iye yangeniswa phantsi kweNkqubo yoBhaliso ngokuzithandela Cosmetic ngo-2012 ukuba imvume FDA.
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, intlangano yethu wendele kuze kwetyiswe karhulumente-of-the-art ubugcisa ngokulinganayo apha ekhaya nakumazwe aphesheya. Okwangoku, abanye bethu lweshishini iqela leengcali ezisingelwe malunga ukukhula Nokhetho Kuku for Peptide izithambiso/ Beauty Peptide Palmitoyl Tetrapeptide-7 / palmitoyl Tetrapeptide CAS 221227-05-0, Thina ngoku izisombululo amane ehamba. Iimveliso zethu kakhulu ngempumelelo abathengisanga kuphela ngexesha imarike Chinese, kodwa kananjalo yamkele ngexesha kushishino lwamazwe ngamazwe.
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, intlangano yethu wendele kuze kwetyiswe karhulumente-of-the-art ubugcisa ngokulinganayo apha ekhaya nakumazwe aphesheya. Okwangoku, abanye bethu lweshishini iqela leengcali ezisingelwe malunga nokukhula Palmitoyl Tetrapeptide-7, CAS 221227-05-0, Palmitoyl Tetrapeptide-3, Njengoko i umenzi onamava nathi ukwamkela umyalelo esingabizi kwaye kungenza kube iyafana picture yakho okanye isampula incazelo. Eyona njongo ephambili yenkampani lokuphila inkumbulo eyanelisayo kubo bonke abaxhamli, kwaye ukuseka ubudlelwane ishishini lwexesha elide kunye abathengi kunye nabasebenzisi kulo lonke ihlabathi.